Faritra Alaotra: tsara ny voka-bary, saingy manahy ny vidiny ny tantsaha | NewsMada
Faritra Alaotra: tsara ny voka-bary, saingy manahy ny vidiny ny tantsaha
Tsara ny voka-bary any amin’ny faritra Alaotra amin’ity taona ity. Mbola tsara kokoa aza, raha oharina ny tamin’ny taon-dasa, any amin’ireo distrika telo: Andilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka. Tonga eto an-dRenivohitra amin’izao fotoana izao ny solontenan’ireo tantsaha avy amin’ireo distrika telo ireo, mihaona amin’ny tompon’andraikitra midinika ny hanatsarana ny fiveloman’izy ireo, manomboka any amin’ny fambolena ka hatrany amin’ny varotra.
Tompon’ny tanimbary ny ankamaron’ny mpamboly any an-toerana fa tsy mpanofa. Taranaka maro nifandimby anefa ny namboly amin’ireny tanimbary ireny: misy ny efa nihena ny velarany, tsy voajary ny sasany, tsy tongan’ny rano ny hafa… Rehefa miakatra indray ny vokatra, 2,5 t na 3 t /ha ny salanisa, tonga ny mpanangom-bokatra manararaotra mividy mora dia mora ny vary. Voatery mivarotra tsy fidiny ny maro satria tsy maintsy mamerim-bola any amin’ny mpampindram-bola. Koa fanirian’izy ireo, mba izy ireo ihany no hivarotra ny variny. Inona ny fanampiana hoentin’ny fanjakana hiarovana azy ireo?
Vesaran’ny olana isan-karazany
Vary vakiambity ny tena fambolen’ny tantsaha any Alaotra, tsy manao varialoha loatra ry zareo any. Miakatra amin’ny volana mey ny vakiambity ka mialoha ny fiakaran’ny vokatra izao no hifampidinihana izay tokony hatao. Olana voalohany ny herinaratra tsy misy any amin’ny kaominina maro. Vitsy ny mahavita mitoto ny variny any am-potony, ary na misy aza ny fitotoam-bary, lafo noho ny vidin-tsolika. Atahorana ny tsy fandriampahalemana, tsy ahafahana mitahiry ny vokatra ho an’izay mitsinjo ny maitsoahitra. Olana lehibe iray efa fantatry ny rehetra ny faharatsian’ny lalana.
Malaza ho sompitr’i Madagasikara ny any Alaotra nefa vesaram-pahasahiranana isan-karazany ireo tantsaha. Misy ny vahaolana avy amin’izy tantsaha ihany fa betsaka ny hiandrasana ny fanjakana hatramin’ny taona maro. Tsy any Alaotra ihany fa manerana ny Nosy, mbola tsy misy mangirana amin’ny ankapobeny ny fiainan’ny tantsaha lazaina fa maro anisa.